Lautaro Martinez oo sare loo qaadayo Mushaharkiisa, qandaraaskana u kordhinaya Kooxdiisa Inter Milan… (Imise sano ayuu saxiixayaa?) – Gool FM
(Milan) 06 Okt 2021. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa la soo warinayaa inay heshiis cusub ku abaal-marinayo Weeraryahankeeda Lautaro Martinez.
Xiddiga xulka qaranka Argentine ayaa sare loo qaadi doonaa mushaharkiisa, waxaana uu saxiixi doonaa qandaraas muddo dheer ku sii hayn doona garoonka San Siro.
Suxufiga wararka suuqa looga dambeeyo ee Fabrizio Romano ayaa warinaya in Lautaro Martinez uu qandaraaska u kordhin doono Kooxda Inter Milan, isla markaana uu qalinka ku duugi doono heshiis cusub oo ku eg illaa sanadka 2026, kaasoo mushaharkiisa sare loogu qaadi doono.
“Todobaadyo yar uun kaddib Lautaro Martinez ayaa qandaraaska u kordhin doona Kooxda Inter Milan, heshiiska waxaa la gaaray bishii September, wuxuuna saxiixi doonaa heshiis cusub oo ku eg sanadka 2026-ka, iyadoo sare loo qaadi doono mushaharkiisa” ayuu Fabrizio Romano ku soo qoray bartiisa Twitter-ka.
Waxaa uu qeybta dambe ee qoraalkiisa soo raaciyey: “Kaddib ciyaaraha caalamiga ah, Kooxda Inter Milan waxa ay sidoo kale wadahadal heshiis kordhin ah la yeelan doonaa Marcelo Brozovic.”